Okwu nke atọ Bildad kwuru (1-6)
‘Olee otú mmadụ ga-esi bụrụ onye ezi omume n’anya Chineke?’ (4)
O kwuru na mmadụ ịkwụwa aka ọtọ abaghị uru (5, 6)
25 Bildad+ onye Shua kwuru, sị: 2 “Ọ bụ ya nwe ọchịchị, ọ dịkwa egwu. Ọ na-eme ka udo dịrị n’eluigwe.* 3 À na-agụtali ndị agha ya ọnụ? È nwere onye ìhè ya na-anaghị enwuru? 4 Oleezi otú mmadụ efu ga-esi bụrụ onye ezi omume n’anya Chineke,+Ma ọ bụ, olee otú onye nwaanyị mụrụ ga-esi bụrụ onye aka ya dị ọcha?+ 5 Ọnwa anaghịdị etisi ike n’anya ya,Kpakpando adịghịkwa ọcha n’anya ya, 6 Ma ya fọdụzie mmadụ efu bụ́ ikpuru Nakwa nwa nke mmadụ bụ́ idide.”
^ Na Hibru, “n’ebe ya dị elu.”